Rikooo ee diyaarado shuqulladaadii ma in prepar 3d v4
Su'aal Rikooo ee diyaarado shuqulladaadii ma in prepar 3d v4
1 sano 8 bilood ka hor #643 by brunoeduardo
news Qaar ka mid ah in version cusub ee prepar 3d v4?
1 sano 7 bilood ka hor #663 by howlak
Horyaalka ugu weyn ma ahan mid sax ah, eg oo dhan diyaarad Rikoo FSX uma shaqeeyaan .:
Rikoo ma aha sameeysa ee xudunta u ah addons ah. Qaar badan oo FSX shaqada diyaaradaha DHALAD in P3D V4, sidoo kale asalka ama modded by Rikoo. Laakiin FS9 Kaganacsiga diyaaradaha uma shaqeeyaan.
1 sano 7 bilood ka hor #667 by macca22au
Guys, aad u yar ama FSX lahayn ama diyaarad FS2004 shaqayn doonaa in P3Dv4.
Inta badan diyaaradaha P3d v3, gaar ahaan dayuuradaha adag la FMC ma shaqeeyaan P3D4
naqshadaha The 64bit of P3D4, waxaa loola jeedaa in qaar ka mid ah diyaaradaha, muuqaal iwm baahan doontaa isbedel qaar ka mid noqon socon.
Waxaan ku boorinayaa qorayaal badan oo halkan downloads inay ka shaqeeyaan on xariirta ah iyadana ay.
Year maalmood 1 2 ago #946 by DRCW
Xitaa Chris Evens ayaa ka gaabsaday wax walba oo uu sameeyay, mana sameynin marka uu sii daayo diyaarad uu sheeganayo inuu ka shaqeynayo V4. Inaad fahamto, waa inaad u oggolaataa cayayaankaas si loo soo saaro, hal mid. Qaar ka mid ah diyaaradaha ayaa shaqayn doona inta ay kuwa kale sameeyaan, waa wax fudud. Uninstall wax kasta oo aan shaqaynayn oo keenaya shilalka. Sug waxoogaa yar, akhri boggaga, oo fiiri kuwa naftooda u huray si xor ah, sooheli jirooyinka. Inta badan qaladaadahan ayaa ku jira isbeddelada code ee P3D ka soocaya 32 ilaa 64. Ugu danbeyntii waxay noqon doontaa mid u qalantaa. Heerka Raajo ee FSW ... Faylasha sawirada waxay u muuqdaan dhamaanba shaqada P3D v4. Waxaan awooday inaan soo dejiyo dhamaan sawirada sawirka. Taasi waxay sabab u tahay faylalka muuqaalku ma aha wax ka badan textures inta ay diyaaraduhu aad uga badan yihiin hawlgalka iyo qaababka.